Bitdefender Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ လုံခြုံရေး - Bitdefender Myanmar
ဈေးဝယ်သူ LoginSign Up လုပ်ပါ
Your language : mmen
Bitdefender Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ လုံခြုံရေး
နှစ်ပေါင်း ၁၈ နှစ်ကျော်တိုင် စနစ်ပေါင်း ၅၀၀ မီလီယံကျော် အား
PC များ၊ Mac များ၊ မိုဘိုင်းစက်များ နှင့် စမတ်ဟုမ်းများ အတွက် အကာအကွယ်
Solution များ ကြည့်ရန်
အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ရန် အုပ်ချုပ်ရလွယ်ကူသော လုံခြုံရေး လိုအပ် ပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့တွင် endpoint မှ ကွန်ယက် ၊ cloud တိုင်အောင် ၎င်းအား ရှိထားသည်။
ဆိုက်ဘာနှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆုတံဆိပ်ရ solution များ နှင့် နည်းပညာ ရှိထားသည်။
ပေါင်းစည်း၊ တည်ဆောက်၊ ထုပ်ပိုး သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချ လိုပါသလား? ယနေ့ပင် Bitdefender အားဖြင့် စွမ်းအားမြှင့်တင်လိုက်ပါ။
သင် ယခင်က antivirus solution များကို ၎င်းတို့ အလုပ်လုပ်သင့်သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ သင် အမှန်စင်စစ် မသိရှိခဲ့ပဲ အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါသလား?
Bitdefender နှင့်အတူ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ အရှေ့တွင် ရှိနေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေး solution များသည် malware ရန်မှ သင့်စက်များအား အကာအကွယ်ပေးသည့်အချိန်တွင် အခြားအရာများ၏ အထက်တွင်ရှိနေသည့် အရာတစ်ခုအဖြစ် သက်သေထူပေးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှုအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် pop-up များ သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်များ မရှိပဲ အသစ်သော နှင့် ရှိနှင့်ပြီးသား ခြိမ်းခြောက်မှု အားလုံးရန်ကို အံတုလျက် ပေးထားသောကြောင့် သင့် လှို့ဝှက် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အထောက်အထား ခိုးယူခံရခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ အော့ဖ်လိုင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ် ဂိမ်းကစားခြင်း) အား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး Solution များ
Bitdefender နှင့်အတူ သင်သည် နောက်ဆုံးပေါ် ဆိုက်ဘာ-ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုပင် ကြိုတင်ခန့်မှန်း၊ ကာကွယ်၊ စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး ဖြေရှင်းပေးသည့် အဆန်းသစ်ဆုံး နည်းပညာများအား ရရှိပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ solution များသည် phishing တိုက်ခိုက်မှုများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် အထောက်အထားခိုးယူသူများထံမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရင်း အဆင့်မြင့် စကားဝှက်ပြုခြင်းဖြင့် သင့်အချက်အလက်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြပ်ပေးပြီး အွန်လိုင်း ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ရန်မှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကာကွယ်မှုကို ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ antivirus နှင့်အတူ သင်သည် သင့်စက်များမှာ ၎င်းတို့အား အမြန်နှုန်း လျော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ဆုံးစေခြင်း မရှိစေပဲ လုံခြုံစေသည့်အပေါ် သေချာမှုရှိစေနိုင်သည်။
သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သတင်း နှင့် အချက်အလက် လုံခြုံရေး အပေါ် အန္တရာယ် မကျရောက်စေပါနှင့်။
Bitdefender GravityZone platform ၏ တိုးမြှင့်ထားသည့် လုံခြုံရေး တည်ဆောက်ပုံအား စကားဝှက်ပြုခြင်း နှင့် backup မှတဆင့် သင့်လုပ်ငန်း အချက်အလက် ပျောက်ဆုံးခြင်းထံမှ အကာအကွယ်ပေးစဉ် malware နှင့် တရားမဝင် ကွန်ယက် traffic ကို တားမြစ် ပိတ်ဆို့ရန် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသည်။
ဤ တစ်ခုတည်းသော အရှိန်မြှင့် platform သည် ရုံးတွင်း သို့မဟုတ် cloud ထဲတွင်ဖြစ်နေပါစေ မည်သည့်နေရာ၊ desktop သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက် မှမဆို endpoint များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းအခွင့်အရေးသစ်များကို တတ်စွမ်းနိုင်ပြီး ရှိရင်းစွဲ အိုင်တီ ပတ်ဝန်းကျင်များသို့ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပြီး ရိုးရှင်းသော ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဆက်သွယ်မှုများ မှတဆင့် ရိုးရာ အိုင်တီ solution များ၏ ထိရောက်မှုအား တိုးမြှင့်ပေးသည်။
ဟက်ကာများ၊ အချက်အလက် ယိုစီးမှုများ၊ Ransomware နှင့် ပို၍ ?
GGravityZone Business Security သည် လုပ်ငန်းအသေးစားများအတွက် နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံး လုံခြုံရေး solution ဖြစ်သည်
ဆိုက်ဘာဒုစရိုက်သမားများသည် သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ရယူ၊ ခိုးယူနိုင်ပြီး သင့် အရေးကြီး လုပ်ငန်းစနစ်များအပေါ် လက်ဦးမှုရယူ သို့မဟုတ် သင့်အဖွဲ့အစည်းအား ပြန်ပေးဆွဲရန် ချုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
GravityZone သည် လုပ်ငန်းဌာနအားလုံးအား နှေးကွေးသွားစေခြင်းမရှိပဲ ယနေ့အချိန်အခါတွင် အသွင်ပြောင်းလာနေသည့် လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ ရန်မှ အားကောင်းသော ကာကွယ်မှုကို ပေးသည့် ပြီးပြည့်စုံသော antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows နှင့် macOS နှစ်ခုစလုံးပေါ်တွင် endpoint အဆင့်၌ malware တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု နှင့် အလွှာလိုက် စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းကို ပေးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်အား လုံခြုံစိတ်ချနေစေရန် ၎င်းသည် ၎င်း၏ ထူးခြားသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မြန်ဆန်နှုန်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း တို့ကြောင့် နောက်ဆုံးပေါ် ဆိုက်ဘာ-ခြိမ်းခြောက်မှုများ နှင့် phishing လှည့်စားမှုများ အပါအဝင် သိပြီးသားနှင့်မသိသေးသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများရန်မှ ကာကွယ်ရန် ဆန်းသစ်သော နည်းပညာဖြင့် ပေါင်းစည်းထားသည်။
နောက်ဆုံးရ Bitdefender ၏ ဆုတံဆိပ်များ
AV-Comparatives ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀
TechRadar အက်ဒီတာ၏ ရွေးချယ်မှု
TechRadar စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀
"Bitdefender Total Security သည် လုံခြုံရေး mega-suite များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ အက်ဒီတာများ၏ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်သည်"
PC Mag, ဩဂုတ်လ ၂၀၂၀
“၄၈ ကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးသူ”
AV-Comparatives ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉
မိသားစု နှင့် မိတ်ဆွေများအား ကာကွယ်ပေးခြင်း ?
လုပ်ငန်း စိတ်ချလုံခြုံစေခြင်းအပေါ် အလေးထားခြင်း ?
ရှင်းလင်းမှု တစ်ရပ် ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
လုပ်ငန်းတွဲဖက်လုပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း ?
လုပ်ငန်းတွဲဖက် တစ်ဦး ဖြစ်ရန်